ဆွေးနွေးပွဲများ – ULAB Myanmar
ULAB Law – English
ULAB Law – Burmese
Contact Address For Help
Tag Archives: ဆွေးနွေးပွဲများ
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့၀င်များ စုံညီအစည်းဝေးကျင်းပ
၂၁အောက်တိုဘာ၂၀၁၉(နေပြည်တော်) အောက်တိုဘာလ၂၁ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့၏ စုံညီအစည်းဝေးကို နေပြည်တော်၌ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦ ...
ဆွေးနွေးပွဲများ, တွေ့ဆုံပွဲများ, အခမ်းအနားများ
21.10.2019 ဆွေးနွေးပွဲများ Demo 13 2
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ...
30.09.2019 ဆွေးနွေးပွဲများ Demo 17 2
NLD ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ နှင့် “သာသည့်မြေဖောင်ဒေးရှင်း”(Tharthi Myay Foundationက တာဝန်ခံများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
NLD ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ နှင့် "သာသည့်မြေဖောင်ဒေးရှင်း"(Tharthi Myay Foundationက တာဝန်ခံများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ ဥပဒေစာအုပ်များလှူဒါန်းပေးအပ်ခြင်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း။(၂၅.၉.၂၀၁၉) ...
တွေ့ဆုံပွဲများ, သတင်းမှတ်တမ်း, အခမ်းအနားများ
25.09.2019 ဆွေးနွေးပွဲများ Demo 18 1
USAID နှင့် TOGETHERNESS တို့ပူးပေါင်းပြီး တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၂)နေ့ နိုဗိုတယ်လ်ဟိုတယ်၊ ပုံဂံခန်းမတွင် ကျင်းပနေပြီး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီး David V.Bre ...
12.07.2019 ဆွေးနွေးပွဲများ Demo 13 3
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများကို ဘက်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သောသင်တန်းများ ပို့ချ
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ(၁၇)ရက်နေ့့့တွင် ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဟိုးနှင့် USAID-PRL မှ budget expert Mr.John Ferry, USAID-PRL မှ Mr. ...
17.05.2019 ဆွေးနွေးပွဲများ Demo 14 4
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ထွန်း တိုးတက်မှု သုံးသပ်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ထွန်း တိုးတက်မှု သုံးသပ်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ...
10.05.2019 ဆွေးနွေးပွဲများ ULAB developer 1120
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် 10.5.2019 ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ...
ဆွေးနွေးပွဲများ, တွေ့ဆုံပွဲများ, သတင်းမှတ်တမ်း, အစီအစဉ်များ
22.03.2015 ဆွေးနွေးပွဲများ Demo 1686 3
ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးဥပဒေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဉပဒေအမှတ်(၁၀)ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၁၈/၂၀၁၇) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အား ဥပဒေပြဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၆ နှင့် ၇ ပါ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ဥပဒေ ဆိုင်ရာအထောက် အကူပေးရေးအဖွဲ့ရုံး အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် များတွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်၍ ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
Union Legal Aid Board Building No.1, Cluster 3,Sports’ Village, Wunna theikdi Ward NayPyiTaw
Call: 067 8103424
Copyright © 2019. ULAB Myanmar. All Rights Reserved.Powered By MyanmarGateway